warkii.com » Waa Kuwan AFARTA Ciyaartoy Ee Qasnadda Lacagta Ah Ee Loo Dhiibay Pep Guardiola Uu Ku Kharash Garayn Doono
Waa Kuwan AFARTA Ciyaartoy Ee Qasnadda Lacagta Ah Ee Loo Dhiibay Pep Guardiola Uu Ku Kharash Garayn Doono
Kaddib markii Manchester City laga qaaday ganaaxii ay UEFA ka saartay Champions League, waxa Pep Guardiola gacanta laga saaray lacag ay ku galo suuqa oo uu kusoo iibsado ciyaartooyo, kuwaas oo uu si xooggan ugu hawlgeli karo xili ciyaareedka dambe, isla markaana ka caawin kara in horyaalka iyo tartanka Champions League uu isku darsado.
Maamulka Manchester City ayaa hor-dhigay tababare Pep Guardiola heshiis cusub oo uu kooxda kula sii joogayo oo uu lacag badan oo mushahar ah ku qaadanayo, waxaanay ugu darayaan furaha qasnadda oo loo dhiibayo si uu ugala baxo lacagta uu uga baahan yahay inuu ku kharash gareeyo saxeexyada cusub.
Wargeyska Daily Mail ayaa ogaaday qorshaha Manchester City ee suuqa, waxaanay si degdeg ah uga hawl-gelayaan marka uu suuqu furmo dhamaadka xili ciyaareedka afar ciyaartoy oo cusub oo kooxda la keenayo.
Guardiola ayaa gacanta laga saaray lacag ka badan 150 milyan oo Gini oo uu kusoo iibsanayo afartan ciyaartoy, waxaana ugu horreeya difaaca ay kooxaha badan ku loollamayaan ee Kalidou Koulibaly oo Napoli ka tirsan, isla markaana ay Manchester United, Liverpool iyo Chelsea danaynayaan.
Laacibka labaad ayaa ah difaaca Bayern Munich ee David Alaba oo uu sannad ka hadhsan yahay heshiiskiisa, laakiin ay kooxdiisu ka fiirsanayso inay iibiso maadaama uu ka warwareegayo inuu qandaraaska kordhiyo. Laacibkan waxa hore loola xidhiidhinayay Real Madrid, Barcelona, Liverpool iyo kooxo kale.
Labada weeraryahan ee Ferran Torres oo Valencia u ciyaara iyo Lautaro Martinez oo Inter Milan ah ayaa iyaguna kusoo baxay qorshaha Citizens ee suuqa.
Martinez ayay muddo dheer daba socotay Barcelona oo aan illaa hadda ka hadhin, waxaanu Guardiola u doonayaa inuu buuxiyo booska uu ka baxayo Sergio Aguero oo qandaraaskiisu dhow yahay.
Tababare Guardiola waxa uu dareensan yahay in dhibaatada ugu weyn ay kooxdiisa ka haysato difaaca oo uu xal u noqon karayo Koulibaly, iyadoo ay jirtay in mushkiladihii haystay ay sababtay inuu Fernandinho ka ciyaarsiiyo difaac.